China Welded hareza tariby harato Diamond hareza harato mpanamboatra sy mpamatsy | Xinpan
Lasitra tariby hareza nohosorana
Lasitra tariby hareza nohosorana, tariby hareza mahitsy, voahodina vita amin'ny vy, izay azo amboarina ho lasa diamondra, lavadrano mahitsizoro (azo apetraka araka ny takian'ny mpanjifa) ny karatra, tsara, ary tsy afaka miakatra ny karatra, manakana ny hery misakana mahery mahery. Afaka ampidirina amin'ny fefy hafa izy io ary azo ampiasaina irery ihany koa.
Izy io dia endrika vaovao amin'ny hareza tariby nohamafisiny ho fiarovana, miaraka amina talenta azo ampiasaina izy ary tsara tarehy be ilay endrika. Azo ampiasaina amin'ny harato mpiambina fefy, varavarana sy varavarankely ary koa azo ampiasaina amin'ny tafika. araky ny filan'ny mpanjifa.
Ny tombotsoan'ny fefy fiarovana hareza:
Saika tsy azo atao ny mianika.
Hery lehibe vy tena sarotra tapahina.
Ny fefy fiarovana mafy dia manakana ny fisehoany ho madio.
Tsy misy fampiasana faharoa, ka tsy hangalarina izy.
Tsotra ny apetraka.
1. Saika tsy azo atao ny mianika.
2.Hore-hery hareza tena sarotra vonoina.
3.Ny sakana fiarovana mahery vaika dia misakana ny fisehoana madio.
4.Mora ny mametraka.
Welded hareza tariby dia volavolan-dalamby miaro maro an'isa sy fiarovana avo vita amin'ny lambam-pandriana mahitsy mifamatotra miaraka amina fonosana ho lasa endrika fitaterana. Welded Razor Wire Mesh dia ampiasaina amin'ny asa fandefasana ny kianja aorian'ny fametrahana sakana misy elatra. Ity vokatra ity dia afaka miaro anao sy ny fanananao ary miantoka ny fiarovana ireo sakana miaro.
Izy io dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny ady ara-tafika, fonja, tranomaizina, tranom-panjakana ary tobim-piarovana nasionaly hafa; Izy io koa dia ampiasaina ho fefy ho an'ny fefy trano fonenana sy fiarahamonina ary trano tsy miankina hafa
Teo aloha: Tady hareza vy tsy misy fangarony 304 fitaovana savaivony 500
Manaraka: Tady fisolo hareza fisaka 15m isaky ny horonana 10 m isaky ny horonana
Diamond Razor Mesh Fefy
Fehiloha tariby misy volo
2.5 mm tariby lehibe strand roa teboka 4 teboka mafana ...
Tady vy hareza vy 304 fitaovana 500 dia ...